5-ta Su’aal Ugu Muhiimsan Marka Aad Ku Jirto Wareysi Shaqo..Arag Jawaabahooda | Xaqiiqonews
5-ta Su’aal Ugu Muhiimsan Marka Aad Ku Jirto Wareysi Shaqo..Arag Jawaabahooda
Warbixintani waxa aan tooshka ku iftiimin doonaa su’aalaha ugu adag ee badanaa ay la kulmaan dadka marka ay ku jiraan wareysi shaqo.
1.Ma Guursatay Mise Waad Qorsheyneysaa?
Su’aalaha noocan ah badanaa waa ay soo laalaabtaan, gaar ahaan dhalinyarrada aad loo weydiiyaa.
Qasab ma ahan in jawaabtaadu ay noqota “Haa ama Maya”, waxaad dhihi kartaa si fudud “waxaan rabaa marka hore in aan xirfadaheyga horumariyo sanadaha soo socda”.
2. Waxyaabaha Aad Ku Xuntahay Maxaa Ka Mid ah?
Marka uu ku weydiinaayo ceebahaada, arinta qaab run ah kaga hadal ha ku jees jeesin su’aasha, u sheeg in aad dooneyso in aad iska hagaajiso waxyaabaha aad ku xuntahay, tusaale u sheeg in aadan luuqadda ingiriiska ku fiicneen aadna ka qeyb gashay tababar luuqadda lagu baranaayo.
Sidoo Kale Aqri: 5 Shaqo Oo Tiknoolajiyadda Darteed Booska Ka Bixi Doono
Qof su’aal weydiiyaha waxa uu ogyahay in uusan jirin qof dhameystiran, waxa uuse su’aashan ku weydiiyey in uu ogaado qaabka aad u jawaabeyso iyo sida aad ugu diyaarsantahay hagaajinta ceebahaada.
3. Hadii Aad Miro Ahaan Laheyd…Maxaad Noqon Laheyd?
Su’aashan danta laga leeyahay kaliya waxa ay tahay in la ogaado falcelintaada ma qosli lahyd, mise ma ku fahmin ayaad dhihi laheyd? muhiim ma ahan in aad doorato liin ama moos, mas’uulka waxa uu doonayaa in uu ogaado fikradaada iyo sida aad dareenkaada u maamuli kartid, isa daji dhoolla cadeey una jawaab qaab macquul ah.
4. MushaarKa hadii Lagaa joojiyo..Ma sii Shaqeyn Laheyd?
Badanaa dadka shaqo doonka ah waxa ay ku jawaabaan “haa” maxaa yeelay waxa ay u heystaan in ninka shaqada leh uu ku farxi doono, laakiin jawaabtaasi sax ma ahan, qofka wax shaqaaleysiinaya waxa rabaa in uu arko qof qiimeynaya naftiisa iyo shaqadiisa, sidaa darteed jawaabta ugu saxsan waa “Maya”.
5. Wax Su’aal Ma Qabtaa?
Marka wareysiga taagan yahay bartan oo kale, aad ayey u qurux badan tahay in aad horay u sii diyaarsatay su’aalo aad rabtay in aad ka sii ogaato shaqada, tusaale ahaan weydii qofkii adiga booskan kaga horeeyey sababtii uu iskaga tagay, markaasi waxaa u cadaanaya in aad tahay qof “falanqeeya ah”, una diyaarsan in uu ka fogaado qaladaadkii ay sameeyeen dadkii isaga ka horeeyey.